Sibbaaddii la turqay W/Q: Cabdiraxmaan Maxamuud Salaad (Guureeye) | Laashin iyo Hal-abuur
Sibbaaddii la turqay W/Q: Cabdiraxmaan Maxamuud Salaad (Guureeye)
Sibbaaddii la turqay (Sheeko)
Carruurtu sidaas si lamid ah baa ay wax yaryar oo is wada jecel u ahaayeen. Ka mid baa aan ahaa. Ciyaar baa ay nooga caddayd. Hablo iyo wiilalba, badanka, isku ciyaar baa la ahaa. Ay’ayda, dhuumaalaysiga iyo ku-tartanka foodhigaallaynta ayaa aannu ugu badnayn. Googgaalaysi iyo boodh-is-maris iyaguna waa jireen. Anigu ciyaarta ‘Qoys qoys’ baa aan ugu jeclaa. Waxa ay tahay: wiilasha iyo gabdhaha ayaa la isu dheellitirayaa, dabadeedna la isu guurinayaa. Haddii ay habluhu bataan, wiilasha ayaa qaar minyaraysanayaan. Haddii wiilashu ay bataanna, ‘marti’ ama ‘guurdoon’ baa marba mid laga dhigi jiray. Waxa aan xusuustaa in mar walba aniga iyo Hoodo aannu isqabi jirney. Jacayl ma aannaan gaadhin, wax uun se dabar ah baa jiray. Meel suryo ah ayaa reer walba eeganayaa oo guri ka dhiganayaa. Ciid ayaa la ka la xaadhayaa oo xero laga samaynayaa. Saalo geel baa la soo uruurinayaa, qodxo Qudhac iyo Jeerinna waa la soo gurayaa. Saalada ayaa afka hore qodax lagaga mudayaa oo qoor looga dhigayaa. Afar lugood oo qodxo ahna waa loo samaynayaa. Mar kale ayaa saalo adhi la soo qaadayaa. Qodaxdii Jeerinka baa inta la soo qoollaabo labada af lagaga mudayaa. Koor bay ka dhigan tahay. Wiilashu, inta ay maydhax soo diirtaan ama xadhig baa ay ul yar oo dhumuc leh afka iyo dabada kaga xidhi jireen oo ‘qori’ ka dhigan jireen. Habluhu, caagad baa ay maro ku xambaaranayeen oo ilmo ka dhiganayeen. Reerahaas bankadhiska ah sida loogu jeedo ayaa xooluhu dhamci jireen ama bahal warjeefi jiray. Kolkaas baa ay balasbalastu naga dhammaan jirtey annaga oo wada boodh ah oo aad mooddo in mar na la xabaalay.